လ – ဇန်နဝါရီ 2019 | Invest Myanmar Summit 2019
လ - ဇန်နဝါရီ 2019
IIn his welcome remarks, U Zaw Min Win, President of UMFCCI said the Invest Myanmar Summit 2019 aimed to “create awareness and elevate the endeavours” of the Union Government in improving the business climate of Myanmar. He also expressed the hope that the Invest Myanmar Summit could support ongoing liberalisation and reform efforts by facilitating …
Welcome Remarks by U Zaw Min Win, President of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI)Read More »
ပထမဆုံးနေနဲ့ ပြောကြားလိုတာကတော့ ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ Invest Myanmar Summit 2019 ကို တက်ရောက်ကြတဲ့ စီးပွားရေးနယ်ပယ်ကဏ္ဍစုံက ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါ ကြောင်း ဦးစွာပြောကြားလိုပါတယ်။ ဒီနေ့အခမ်းအနားက ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းပြီး အမြဲပြောင်းလဲတိုး တက်နေတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခင်းအကျင်း မြင်ကွင်းတွေကိုသိရှိပြီး ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အတွက် အကောင်းဆုံး အခွင့်အလမ်းတွေ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံး ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ အရေးပါတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုအဖြစ် ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ဒီနေ့အခမ်းအနားရဲ့ နှစ်ရက်တာကာလအတွင်းမှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနာတွေ၊ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍက မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အလားအလာနဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကို ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်တဲ့ …
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့၌ မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ (၂) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော Invest Myanmar Summit 2019 တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသော မူဝါဒဆိုင်ရာမိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ဘာသာပြန်ဆိုချက်Read More »
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး / By unicode
U Ye Htut Naing isabig fish inasmall pond. The provincial mogul has chaired Tanintharyi Region’s Chamber of Commerce and Industry since 2014, and this year entered his second term at the helm of the private sector body in Myanmar’s southeastern region. Among his many business ventures, he is the vice chairman …
Connectivity with Thailand will unlock Tanintharyi’s economy, says business chiefRead More »
Tea growers around Pindaya in the Danu Self-Administered Zone are going organic as more foreign buyers show interest in the area’s chemical-free green tea. The small tea plantations that hug the slopes of Mount Yasagi near Pindaya in southern Shan State are undergoingatransformation, as growers cash in on the international market potential for …
A market brews for organic tea from the Shan hillsRead More »
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး / By unicode
Weavers of traditional textiles in Mandalay Region have joined forces in an attempt to counterathreat to the industry from cheap copies imported from China and India. Weavers at Amarapura have formed an association representing hundreds of small and medium weaving businesses in Mandalay Region to confrontathreat from cheap copies of traditional …
Mandalay weavers join forces to fight cheap importsRead More »
အစားအစာပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရေလုပ်ငန်း / By unicode
Myanmar is striving to upgrade its aquaculture sector amidafall in the prices of fishery products in recent years despite higher export volumes and revenue. Myanmar is hoping to earn at least US$1 billion from fisheries exports this year following strong growth in the sector and the lifting ofaEuropean Union ban on …
Fisheries sector upgrades as exports set recordsRead More »